Oge Ugboro ije ruo Umuttepe Road n'ihi omumu ihe omumu | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara41 KocaeliUzo oge ruo na Umuttepe Road n'ihi omumu ihe kariri
05 / 11 / 2019 41 Kocaeli, General, Ụzọ Awara Awara, Mpaghara Marmara, Turkey
obere oge ruo umuttepe ụzọ n'ihi ọrụ nke ustgecit
Ugboro nke tozọ Umuttepe N'ihi Mpụga Gị; Mahadum Kocaeli Umuttepe Campus B n'ihu nke ndị uwe ojii Martyr Serdar Gökbayrak na-agafe agafe agafe ọrụ. N’ihi ọmụmụ ihe a, e guzobere okporo ụzọ nwa oge maka njem nke ọha. 5 ga-amalite dị ka abali Tuesday (November) n’oge ọmụmụ. Baki Komsuoğlu Boulevard ga-emechi emechi.
A ga-emechi BULVAR njem
Kocaeli Metropolitan Municipal wuru àkwà ụkwụ na 2016 na Mahadum Kocaeli Umuttepe Campus iji hụ na ụmụ akwụkwọ gafere okporo ụzọ dị mma. Igwe uwe ojii Martyr Serdar Gökbayrak mechiri ụzọ maka ndị njem n'ihi ihe ọghọm n'ọnwa gara aga. 5 ga-ebido dịka nke abalị Tuesday na November. Baki Komsuoğlu Boulevard ga-emechi emechi. N'ihi ọrụ mmezi a ga-arụ, e guzobere okporo ụzọ ga-adị nwa oge maka ụgbọ njem ndị njem na nke ọha.
obere oge ruo umuttepe ụzọ
Pozọ Oge Eynerc Junction na Exzọ Ọpụpụ na Istanbul
Ụgbọ okporo ígwè Umuttepe bụ Safer
Ụzọ si Derince ruo Umuttepe dị mma
Akwụsị nke atọ nke oge a kwụsịrị ịpụ na Kocaeli
Zọ D-400, Ndozi Bridge N'ihi 20…
President Gümrükçüoğlu na-akpọsa usoro ụzọ usoro okporo ígwè
Ụzọ na usoro oge maka ógbè abụọ nke Kocaeli
IETT Nzọgharị na Nsochi Oge a ga-emegharị
Ụzọ Nrụgharị Ọhụrụ gaa Eskisehir City Hospital
Nhicha na-enweghị atụ na Ụzọ Ụzọ
Nzaghachi Gọvanọ nke Bilecik: 'YHT n'okporo ụzọ…
Şehit Polis Serdar Gökbayrak yaya üst geçidi
Mahadum Kocaeli Umuttepe Campus